Eriri Geophone, Igwe Geophone - XYB
XYB na-eme ka ndi mmadu nwee ikike na teknụzụ kacha elu n'ụwa, nwere ndị ọrụ mba ụwa tozuru oke.
Na elu-uzu technology, elu-edu ngwaahịa, ezi uche price, ọnụ na ndị ahịa anyị izute a amamiihe n'ọdịnihu ..
Na “onye ọrụ dabere, mepụta uru kasịnụ maka ndị ọrụ” ebumnuche azụmaahịa.
Companylọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu na "nkenke, nlezianya, ike" ụdị azụmahịa.
240 Hz High Spurious Frequency Geophone 0.75% L ... Akpado na
240 Hz High Spurious Frequency Geophone 0.1% Lo ... Akpado na
100Hz High ziri ezi na Stable Signal mmepụta Ge ...
Companylọ ọrụ ahụ na-etinye aka na R & D, n'ichepụta na ire ere ngwá mmanụ, mkpọpu ala na ngwa mmepụta, yana akụrụngwa nyocha ala. Ọ gafere asambodo sistemụ njikwa njikwa ISO9000, asambodo sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi, njikwa asambodo na nchekwa nchekwa ọrụ.
Ngwa ndị na-eduga n'ịchọpụta njegharị nke geophone nwere usoro isii, ihe karịrị ụdị 60.
Ngwaahịa na-ọtụtụ-eji mmanụ ala, ịnweta na geological ngagharị, okporo ụzọ, akwa, mmiri mmiri na ọwara owuwu, arọ n'ibu vibration, ala ọma jijiji nlekota wdg
Ihe karịrị 60 iche e nyere ikike maka ikike patent nke mba ahụ
Gụnyere ihe karịrị 20 nchọpụta Kemịkalụ maka mepụtara, karịa 10 iche iche nke n'ógbè-larịị sayensị na nkà na ụzụ rụzuru, na ihe karịrị 20 mba, n'ógbè na ọchịchị na sayensị na nkà na ụzụ enọ. Ọ gafere asambodo sistemụ njikwa njikwa ISO9000, asambodo sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi, njikwa asambodo na nchekwa nchekwa ọrụ.
Ọ gafere asambodo sistemụ njikwa njikwa ISO9000, asambodo sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi, njikwa asambodo na nchekwa nchekwa ọrụ.
Ahịa ngwaahịa ekpuchiwo isi ụlọ mmanụ na ala ubi, ma kpụga ya na Europe, America, Africa na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ na mba 50.
Ọdịmma ngwaahịa na aha ọma bụ nnukwu nnabata na otuto.
Ọnwa Itolu 02, 2020
Sercel Na Tronic's Team Up Maka MEMS Dabere Geophones
Sercel na TRONIC'S Microsystems, ejikọtara ọnụ maka imepụta ọhụụ nke ihe mmetụta seismic, ma ọ bụ geophones, dabere na MEMS. Ejiri CEA Leti mee ihe, 0.1µg mkpebi accelerometer akpọrọ n'okpuru agụụ enweela nke ọma site na TRONIC'S Microsystems. Ge ...
Urban Geophone Array na-enye ọhụụ ọhụrụ na Los Angeles Basin
1 August 2018 – N’iji ọtụtụ kọfị nwere ike ịbugharị geophones agbasoro ihe dị ka otu ọnwa n’azụ ụlọ, ebe a na-eme golf na ogige ọha na eze, ndị nyocha chịkọtara data zuru oke iji nye ha ohere ịpụta omimi na ọdịdị nke ala San Gabriel na San Bernardino. Los Angeles, California. Seismo ...
Ekekọrịta Geophones, Nchịkọta Global Global Overview, Ohere, ,dị, Ọganihu Globalwa, Mmetụta nke Covid-19 na Industrylọ Ọrụ, Nchịkwa Companylọ Ọrụ Na-eduga, Na Amụma Nzuzo Mba na 2025
Geophones Market Report N'okpuru nyocha na ahịa òkè site n'aka ndị isi egwuregwu, akụkọ Geophones Market na-ekpuchi isi obodo, ego ha nwetara, na nyocha ọnụahịa site na azụmaahịa yana ngalaba ndị ọzọ dị ka Akara ...